ESI TINYE SISTEMỤ ASỤSỤ NA WINDOWS 7 - WINDOWS - 2019
Ịwụnye asụsụ mkpọ na Windows 7
PDF (Akwukwọ Akụrụngwa Portable) dị mma maka ịmepụta ihe dị iche iche e biri ebi n'ụdị kọmputa, maka mbipụta akwụkwọ, magazin, akwụkwọ ntuziaka na akwụkwọ ndị ọzọ na Ịntanetị. Iji mepụta ma gbanwee faịlụ na usoro a, enwere ọtụtụ mmemme, nke anyị ga-atụle n'isiokwu a.
Ejirimara ụlọ ọrụ ABBYY mepụtara mmemme a ma bụrụ ngwá ọrụ dị ike maka ịkpụ PDF site na faịlụ na ihe oyiyi. Akụrụngwa na-enye gị ohere igbanwe faịlụ nke ụdị dị iche iche na PDF ma gbanwee akwụkwọ ndị a natara na nchịkọta bara uru.
PDF Onye Okike
Nke a bụ ngwanrọ ọzọ dị ike iji rụọ ọrụ PDF. Ikike iji chekwaa akwụkwọ na foto, na-enye gị ohere ịhazi profaịlụ, nwere ọrụ nke nchedo na mbufe faịlụ site na e-mail.
A na-enye nchịkọta akụkọ a dị ka ngwongwu dị iche ma na-agụnye ngwá ọrụ bara ọgaranya iji gbanwee ọdịnaya na akụkụ nke PDF.
Download PDF Onye Okike
PDF24 Onye Okike
N'agbanyeghị ụdị aha ahụ, onye nnọchiteanya a dị iche na ngwanrọ mbụ. Usoro a, dị ka ndị mmepe, bụ onye mmepụta ihe PDF. Na ya, ị nwere ike ịtụgharị, ebuli ma jikọta faịlụ, yana iziga ha site na e-mail.
Akụkụ bụ isi nke PDF24 Onye kere bụ njikọta na ọrụ Ịntanetị, nke na-enye ngwaọrụ ndị ọzọ maka nhazi akwụkwọ, tinyere fax igwefoto, ọrụ akwụ ụgwọ na ọnụ ọgụgụ dị mma na ike izipu ozi fax site na ngwa ọ bụla nwere ọrụ a.
Download PDF24 Onye Okike
PDF Pro - ọkachamara nhazi na nchịkọta akụkọ. Na mgbakwunye na ikike ịbupụ gaa n'ụdị dị iche iche, dezie ọdịnaya, ebuli ma hazie nchebe, ọ nwere ọrụ nke ịmepụta akwụkwọ site na ibe weebụ. Akụkụ bụ isi nke usoro ihe omume ahụ bụ ikike ịmepụta mmebi nke arụmọrụ nke otu ụdị site na ịmepụta na ichekwa ọrụ. Njirimara a na-enye gị ohere iwepụta ngwa ngwa ederede.
7-PDF Onye kere
A na-ezube software a nanị maka ịtụgharị akwụkwọ na PDF. 7-PDF Onye kere nwere ntọala nchekwa, na-enye gị ohere ịlele faịlụ site na iji onye na-agụ akwụkwọ, ma nwee ike ịchịkwa ya "Iwu iwu".
Download Onye edemede 7-PDF
E mere atụmatụ a iji jikọta ọtụtụ faịlụ nke usoro a na-akwado na otu akwụkwọ. N'agbanyeghị na eziokwu ahụ na-arụ ọrụ naanị, ọ na-agụnye ọtụtụ ntọala maka ọrụ a. Ndị a na-agụnye mbubata ibe edokọbara, na-agbakwunye ihe mkpuchi na akara ụkwụ, ibefe ibe, na ntọala nche.
Download PDF Ikpokọta
pdfFactory Pro bụ onye nyocha ngwa ngwa nke na-etinye aka n'ime ngwa niile na-akwado ọrụ mbipụta ahụ. Na ya, ị nwere ike ịmepụta PDF site na data ọ bụla nwere ike bipụta. Ihe omume a bu nke nchịkọta di mfe, nwere ike izochi faịlụ ma chebe ha na okwuntughe.
Nke a bụ usoro ọzọ na ọrụ nke onye nbipute na onye editọ. PDF Complete na-enye gị ohere ibipụta akwụkwọ, dozie ntọala nche, ma gbanwee ọdịnaya na ibe.
CutePDF ede ede
Akụrụngwa a anaghị enwe njikwa eserese nke ya ma rụọ ọrụ naanị dịka ụzọ obibi akwụkwọ. CutePDF na-edekọ ihe n'ime usoro ihe omume ahụ ma nwee ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ntọala. Ihe dị iche iche bụ nnweta nnweta na nchịkọta akụkọ ntanetị nke PDF-akwụkwọ.
Download CutePDF ederede
Akụrụngwa a na-enye na nyocha a na-enye gị ohere ịmepụta, gbanwee na gbanwee faịlụ PDF. A ga - ekewa ihe omume ndị a na ụzọ abụọ - ndị editọ ma ọ bụ ndị na - agbanwe agbanwe nwere nnukwu ngwaọrụ na ndị na - ebi akwụkwọ dị mfe. Nke mbu, n'ọtụtụ ọnọdụ, na-ejikọta ọnụ maka ịrụ ọrụ na akwụkwọ, mgbe nke ikpeazụ na-ebipụta data - ederede na ihe oyiyi.